लकडाउनमा कहाँ चुक्यो सरकार ? के गर्नुपथ्र्यो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more लकडाउनमा कहाँ चुक्यो सरकार ? के गर्नुपथ्र्यो ?
लकडाउनमा कहाँ चुक्यो सरकार ? के गर्नुपथ्र्यो ?
बैशाख २४ गते, २०७७ - १२:०६
कोरोना विषेश, स्वास्थ्य/उपचार
काठमाडौं । कोरोना महामारीविरुद्व लकडाउन घोषणा गरेको सरकारले व्यवस्थापनामा भने निकै कमजाेर व्यवहार देखाएकाे । सरकारले लकडाउन त घोषणा गर्यो तर लकडाउनकै कारण सिर्जना भएको आम समस्यालाई भने वेवास्ता गरेकाे देखिएकाे छ ।
यहाँ लकडाउन लगाईरहँदा व्यवस्थापना कहाँ कहाँ चुक्यो भनि उल्लेख गरिएको छ ।
कहाँ–कहाँ चुक्यो सरकार ?
– लकडाउनको सिद्धान्त भनेकै जो जहाँ छ, त्यहि बस्ने भन्ने हो । त्यसको लागि सरकारले विपन्न वर्ग पहिचान गरेर जीविका धान्न पुग्ने गरि राहत दिनुपर्थ्यो ।
– लकडाउनमा नागरिक घरभित्र बस्ने सरकार फिल्डमा उत्रिनु पर्ने हो ।
– पहुँच, पास, बल मिच्याई, लेनदेनआदिबाट आवतजावतको अनुमति लकडाउनमा नहुनुपर्ने हो ।
– लकडाउनको समयमा हरेक समुदायमा व्यापक टेष्ट गरेर देशको संक्रमणको स्थिति पत्ता लगाउनु पर्ने हो ।
– लकडाउनको समयमा उच्च, मध्यम र निम्न आय भएका व्यक्तिको विवरण संकलन गरेर विपन्न आय भएकालाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ।
– व्यापक टेष्ट बढाएर हरियो, पहेंलो र रातो क्षेत्र पत्ता लगाउनुपर्ने हो ।
– ७७ जिल्लामा कम्तीमा एउटा एऋच् मेसिन उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।
– लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई फाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ।
– हरेक आन्तरिक नाकामा प्रहरी खटाएर आवतजावत ठाउँको ठाउँ रोक्नु हो ।
– लकडाउनलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नको लागि मजदुरहरुको टेस्ट गरेर तथा उद्योगमा आवासीय व्यवस्था गरेर उद्योग चलाउने, कृषकलाई मल, बिउ, औषधि तथा अनुदान दिने, औषधि उद्योगबाट पर्याप्त औषधि उत्पादन गर्न लगाउने, एक वर्षको लागि औषधि र खाद्यान्न स्टक राख्ने, अस्पतालको क्षमता बढाउने, आइसीयु र भेन्टिलेटर चलाउन तालिम दिने लगायतका तयारी गर्नुपर्ने हो ।
– अर्थतन्त्रलाई जोगाउन मितव्ययी हुने, एक रुपैयाँ पनि भ्रष्ट्राचार गर्ने जो कोहिलाई कारबाही गर्ने, अनावश्यक शिर्षकका बजेटलाई अत्यावश्यकमा परिणत गर्ने आदि गर्नुपर्ने हो ।
– लकडाउन र सामाजिक दुरी उल्लङ्घन गर्दा विश्वका धेरै देशको कुन अवस्था भएको छ, त्यसबाट पाठ सिकेर रोकथामको लागि मन, बचन र कर्मले काम गर्नु हो ।
– सम्भावित भोकमरीको रोकथाम गर्ने जमिन बाँझो राख्न नपाइने, सामुहिक खेतीलाई प्रश्रय दिने, परम्परागत खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने, हरेक स्थानीय निकायलाई आत्मनिर्भर बनाउने सामग्री र उपाय दिनुपर्ने हो ।
– धरासायी भएका क्षेत्रलाई उठाउन बैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ।
– दीर्घरोगीका औषधि सरल, सुलभ र सहज रुपमा पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु हो ।
– परामर्श सेवा हरेक स्थानीय निकायमा सुरु गर्नुपर्ने हो ।
– दुर शिक्षा, अनलाइन कक्षाको मापदण्ड, विषयवस्तु तथा इन्टरनेटमा पहुँच बढाएर एकरुपता कायम गर्नु हो ।
– लकडाउन पछिको जीवन संचालन गर्ने चरण, तरिका र सुरक्षित उपाय तयार गर्नु हो ।
– विदेशमा फसेका नेपालीलाई ल्याएर पुनर्थापन गर्नको लागि तयारी गर्नु हो ।
– मजदुरबीच दुरी कायम गरेर हाइड्रो पावर, सडक मर्मत, चक्रपथ विस्तारका बाँकी काम चीनलाई हस्तान्तरण गर्नुपूर्वका काम सक्नु हो ।
– लकडाउनको अनुगमन मुल सडकमा होइन, भित्रि बस्तीमा बढाउनु हो ।
– सिमानामा १०० प्रतिशत शिल गर्न सिमाबासी र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त गस्ती २४ घण्टा कायम गर्नु हो ।
– दातृराष्ट्र तथा छिमेकबाट सक्दो उपकरण, औषधि तथा प्रबिधि सहयोग लिन अग्रसर भइरहनु हो ।
– देशमा सबैको लागि बराबर कानुनी शाशन स्थापित गर्नु हो ।
बैशाख २४ गते, २०७७ - १२:०६ मा प्रकाशित
दक्षिण कोरियामा बसोबास गर्ने नेपालीलाई कोरोनाको खोप निःशुल्क
बेलायतबाट आएका तीन जनामा देखियो नयाँ प्रकारको कोरोना संक्रमण
कोरोनाबाट विदेशमा तीन सय १९ जना नेपालीको निधन
२४ घण्टामा थप ४०३ जनामा कोरोना, ६ जनाको मृत्यु
अमेरिकासँग चीनको व्यापार बचत बढ्यो
भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड पाँच लाख भन्दा बढी
प्रदेश नं. १ मा २५ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिए
भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब एक करोड ५ लाख
चीनमा मङ्गलबार ११५ जना कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित भेटिए
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्धारा चीनले उत्पादन गरेका कोरोना खोपको अध्ययन गरिरहेको जानकारी